गाउँखाने कथा - २ (Nepali Gau Khane Katha)
टिमुर्केको भन्यौ रे
ईन्द्र, तिमी अचानक कता हरायौ ?
गीतकार अनी कर्णल आनन्द सँगको मेरा बिगत क्षणहरु - ३
अपडेट: गाउँखाने उत्तर दिने सबैलाइ धेरै धेरै धन्यबाद। हिन्दी अन्ताक्षरी र बिदेशी आइडलहरुले नेपाली मौलीक मनोरन्जनको ठाउं ओगटेको समयमा आफ्नो पन झल्काउने दौंतरीको यो सानो प्रयास मात्र हो। आशा छ तपाइहरु यसमा सामेल भएर या आफ्नोपन झल्कने अन्य रमाइला सामाग्री प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
अब भने गाउँखाने कथाको उत्तर तिर लागौं। पहिलो उत्तर मिलाउनेले पुरस्कारको रुपमा गाउं माग्न सक्नुहुनेछ। त्यो गाउं रहेको खण्डमा त्यो नै गाउं दिइने छ नत्र बिजेताले नयां गाउं पाउनुहुनेछ। को हो भयो होला त गाउं खाने कथाको पहिलो बिजेता? के होला त कथुरे गोरू? अनुमान गर्नुभयो? धेरै जनाको अनुमान मिल्यो। कथुरे गोरू हो मुसा र बिजेता हुनुभएको छ लुना। ल लुना जी कुन गाउं मनपर्छ मागी हाल्नुहोस।
यस पटकबाट गाउं नै खाने कथा शुरुहुदै छ अर्थात पहिलो उत्तर मिलाउनेले गाउं माग्न पाउनेछन। यदी त्यो गाउं अरुले पाइसकेको खण्डमा अरुनै गाउं दिइने छ। गाउं खाने कथाको श्रिखंला हरेक शुक्रबार आउने छ तथा नेपालका गाउं नसकुन्जेल सम्म चल्ने छ। गाउं खाने कथा २ को प्रश्न यस प्रकार छ:
होक्कां गोरु,भित्तो फोरु,धर्तीमुनिको कथुरे गोरु, के हो?
टिमुर्केको भन्यौ रे मलाई,चिप्लो घस्न जानेको थिन
पछारिदा दोष थोपरिछ्यौ, छिर्की मैले हानेको थिन
मन भरी श्रदा मुटु भरी माया कसरी पोखाउनु
भिरबाट गुल्टाउँदा नि अझै पराइ ठानेको थिन
उडान उची थियो कता पुग्यौ मलाई थाहा भएन
बज्रीयौ रे नराम्री आखिर डोरो मैले तानेको थिन
अनुभुतीमा सुन्दरता तिमी अलौकिक थियौ मेरा लागि
मनले सुन्थे मुटुले छाम्थे आँखाले छानेको थिन
चर्कायौ मुटु थर्कायौ छाती फुटेर भेल कती बगे
जिबन हारी सक्दा पनि झूट भनी मानेको थिन
बैरी भै धावा बोले नि ,साथी भै फेरी खाता खोले नि
आगमन स्वागतार्थ मुटुको किल्ला बानेको थिन
प्रश्नइ प्रश्न हरुको घडा बोकी
स्वर्ग बाट झर्यौ धर्ती मा
घर घरमा टेलिभिजनमा आयौ
मानीस हरुको मन मनमा छायौ
अरुलाई प्रश्न गर्ने तिमीलाई
आज एउटा प्रश्न सोध्ने मन छ
तिमी पूर्वको झापा बाट उदायौ
पश्चिमको रोल्पा र,
बैतडी अनी कंचनपुर सम्म धायौ ।
मेचीको आँशु लाई काठमाडौं पुर्यायौ
कालीको रोदनले सिंहदरबार हल्लायौ
जनताको बोली बनी प्रतिगामी थर्कायौ
शहिद्को गोली बनी राष्ट्रघाती तर्सायौ
तिमी यती छिट्टै नहराउनु पर्थ्यो ।
जनताको पिर र ब्यथा हरु लाई
देश बनाउछु भनी खाका कोर्ने हरुको
कान सम्म पुर्याइ रहनु पर्थ्यो ।
झुपडीका सुस्केरा र क्रन्दन हरुले ,
जनताको कर र भोट् ले ठडीएका
बाद्शाहहरुका महलहरु थर्काइ रहनु पर्थ्यो।
र गरिरहनु पर्थ्यो खबर्दारी,
घुस्खोरी र भ्रस्टाचारी हरुलाई ।
र चलाई रहनु पर्थ्यो डण्डा,
देश लुट्ने र झन्डा च्यात्ने हरुलाई।
अनेक अबरोधहरु आए यात्रामा
तिमी कहिल्यै बिचलित देखिएनौ
कैयो बाधाहरु आए बाटोमा
तिमी कहिल्यै थकित देखिएनौ
द्रिध रह्यौ तिम्रो बिचारमा
र खोजी रह्योउ जवाफ तिम्रा जटील प्रश्नहरुको ।
चढिरह्यौ उन्नती को सगरमाथा
र फहराइ रह्यौ झन्डा आत्मबिश्वास र स्वाभिमानको ।
तिम्रो कलम कुल्चन खोज्नेहरु,
आँफै पछारिये पाताल्मा
तिम्रो मुख थुन्न खोज्नेहरु
फ्याकिये ईतिहासको रछ्यानमा
बटुली रह्यौ आवाज कुनाकप्चाहरुको
र बुलन्द गर्‍योउ जनताको गाली
आमाको छातीमा कुल्चनेहरुलाई।
बजाइ रह्यौ स्वतन्त्रताको ताली,
र रोपिरह्योउ प्रश्नका भालाहरुले
जनताको मालिक हुँ भन्नेहरुलाई।
प्रश्नइ प्रश्नहरुको घडा बोकी
स्वर्ग बाट झर्यौ धर्तीमा
मानीसहरुको ढुक्ढुकीमा छायौ
देखेथेँ तिमीलाई अस्ती
नाची रहेथियौ तिम्रै आगनमा
खेलीरहेथेयौ तिम्रै दुई कोपिलाहरुसँग
देख्दिन तिमीलाई आज
टेलिभिजनका ति पर्दाहरुमा,
(ईन्द्र लोहनी मा समर्पित)
Posted by: Himal_Paari Labels: गीत/ गजल/ कविता
त्यो जुत्ताको आवाज आनन्दको नै रहेछ । वहाँ कोठाभित्र पस्नुभयो म पनि अलिक संयमित बने किनकी म पनि नौलो नै थिए। वहाँ अलिक अन्कनाउदै मेरो अगाडि बस्नु भयो। मैले नमस्कार गरेँ र मेरो परिचय दिए। वहाँ जुरुक्क उठेर मलाई नमस्कार भन्दै “दिदी मैले तपाईंलाई नमस्कार गर्नु पर्छ किनकी तपाईं म भन्दा सिनिअर लेखक हुनुहुन्छ। म सानो हुँदा नै तपाईंका रचनाहरु पढ्ने गर्दथें”। भने, मानौ त्यो समय आनन्दको हाउभाउ यस्तो लाग्दथ्यो कि म वहाँभन्दा कुनै सिनिअर अफिसर हुँ । हुन त सेनाका मान्छेहरु जत्तिपनी मसंग नजिक थिए मैले सबै नै अनुशासित भेटें। मलाई आनन्दको म प्रतिको सद्भावले यस्तो लाग्यो आनन्दभित्र अहमता र अभिमान भन्ने रहेनछ । मलाई पनि वहाँसँग बसेर कुरा गर्न अप्ठ्यारो भ्एन। अब हाम्रा भावनाहरु आदन प्रदान हुन थाले । हाम्रा कुराहरु गीत, सङीत बारे नै भए।
लगभग दुई घण्टा सम्म हाम्रो कुराकानी हुँदा पनि त्यो भाइको अत्तोपत्तो भएन । म भने अब अलिक अत्तालिन थालिसकेकि थिए। हुन त त्यत्रो समय बित्दा पनि समय गएको पत्तो भएन। केही छिन पछी आनन्दले नै भन्नु भयो “ठिकै छ दिदी म बाहिर सम्म छाडि दिन्छु नि अब मेरो पनि ड्युटी अफ हुने बेला भयो”। मैले पनि हुन्छ नि त भनेर पाँच बजेको प्रतिक्षामा बस्न बिचार गरें। त्यही बिचमा आनन्दलाई फोन आयो त्यो फोन राम्रकृष्ण ढकालको रहेछ। आनदले यत्ती भनेको मैले सुने की “भाइ आचार्य प्रभा दिदी अहिले मसँग हुनुहुन्छ तिमी चाडै आउ” त्यहा बाट पनि हुन्छ भन्ने नै जवाफ आयो। त्यस्को केहीक्षणमा नै रामकृष्ण पनि त्यहा आइपुगे। अनी फेरी हाम्रा कुराकानी गीत संगीत पट्टी नै ढल्किए । रामकृष्णको ''आरोह'' अल्बमको बिमोचन दुइदिन पछाडि रहेछ त्यसको बिमोचनको निमन्त्रणामा उनले मलाई पनि बोलाए। हुन त उनले मेरो गीत पहिला नै फिल्ममा गाइसकेका थिए, तर म झापामा नै धेरै बस्ने हुनाले मेरो कसैसँग त्यती भेट हुँदैन थियो । मेरो उपस्थिले रामकृष्ण पनि खुशी भए। यसरी पहिलो भेट नै मेजर साहबसँग रमाइलो र खुलस्तसँग बित्यो। म सपनामा नै छु जस्तो पनी महसुश भैरहेको थियो। किन कि आनन्दको भद्रपन र सहज स्वभावले म ज्यादै प्रभावित भैरहेकि थिए। यस्तै कुराकानीको प्रसङमा नै दिनको पाँच बजिसकेछ । हामी सबै निस्कनलाई तयार भयौ । रामकृष्ण र आनन्द्ले सहिद गेट सम्म छाडिदिए । फेरी रामकृष्ण्को बिमोचनमा भेट्ने बाचा गर्दै हामी त्यस्दिन छुट्टीयौ ।